Side Ties Manufacturers sy Suppliers | China Side Ties Factory
Side tie dia nanjary mba hahazoana mpitarika ny lafiny Groove ny bakoly insulator.
Wire namorona insulator lafiny fifandraisana no vita amin'ny aluminium nanarona vy, aliminioma poakaty, ny tafo fitaovana vy. Ara-nofo ny Hely fifandraisana ara-nofo dia miankina amin'ny karazana mpitarika mba ho ampiharina amin'ny, ACCC na ACSR. Nandrisika vy lafiny fifandraisana zara raha mampiasa ireo, raha oharina amin'ny aluminium lafiny fifandraisana.
Ankoatra vonona amin'ny kofehy rube. Izay manome Nihazonako ambony sy ny herinaratra fampisehoana amin'ny tsara indrindra insulation toetra ny fizarana ampiharina.
Side tie dia ampiasaina ho an'ny mpitarika ny nafatotra ho amboarany niteraka avy eny ambony any MV sy fampitana hery HV tambajotra. Izy ireo dia natao ho lehibe kokoa noho ny ambony lafiny tsipika Groove fomba fifandraisana.
Jera dia afaka ny hanana lehilahy preformed-misaintsaina, ary preformed lafiny fifandraisana araka ny tariby famaritana, insulator vozony sy ny savaivony lavitra eo amin'ny tsato-kazo.